ရေချိုးခန်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆို အသုံးတည့်မယ့်အချက် (၅) ချက် – Lifestyle – Duwun
ရေချိုးခန်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆို အသုံးတည့်မယ့်အချက် (၅) ချက်
ကြေးချွတ်ဆေးတွေကို မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းတဲ့ ရှလကာရည်နဲ့ဗီနီဂါပေါင်းစပ်မှုကို ရွေးနိုင်ပါတယ်။
Felicity 2017-04-05 06:41:47.0, 2017-04-05 06:41:47.0
ရေချိုးခန်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်ဆိုတာ လွယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်လည်းကုန်တယ်၊ အားလည်းစိုက်ထုတ်ရတယ်။ ခေါင်းကကျွတ်သွားတဲ့ဆံပင်တွေက ရေဆင်းပိုက်ကိုပိတ်တာတစ်မျိုး၊ တံခါးညစ်ပတ်တာကတစ်ဖုံ ၊ အနံ့အသက်မကောင်းတာနဲ့ဆိုတော့ ရေချိုးခန်းကိုလည်း မဖြစ်မနေ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာပါပဲ။ ဒီကြားထဲ ကြေးညှိတွေတက်ပြီး ချော်လဲတာလည်းဖြစ်တတ်လို့ အနည်းဆုံး တစ်လတစ်ခါတော့ ရေချိုးခန်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပါတယ်။
၁။ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ပါအောက်ဆိုက်နဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ရောဖျော်ပြီး ဝါးနေတဲ့မှန်ကို ဖျန်းပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရေမြှုပ်လေးနဲ့ ပွတ်လိုက်ရုံနဲ့ မှန်က ကြည်လင်သွားပြီ။
၂။ တလက်လက် တောက်ပနေတဲ့ ရေချိုးဇလုံကို မြင်ချင်လား? ရှာလကာရည် ခွက်တစ်ဝက်နဲ့ ပွတ်တိုက်သန့်စင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ rubbing alcohol တစ်ခွက်ကို ချင်တွယ်ခွက်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံစာ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါထည့်ပြီးဖျော်ပါ။ အားလုံးကို ရေနွေးနဲ့ထပ်ရောပြီး ညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာတွေကို လောင်းချထားလိုက်ပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပြီး ပြန်ဆေးလိုက်ရင် ရေချိုးဇလုံက အသစ်အတိုင်းပြောင်လက်နေရော။
၃။ အိမ်သာအထိုင်ကို ခံတွင်းသန့်ဆေးနဲ့ ဆေးလို့ရတယ်။ သွားတိုက်ဆေးနဲ့လည်း ဆေးလို့ရတယ်။ ဘာကိုပဲသုံးသုံး အိမ်သာပေါ်က ညစ်ပတ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ကို သုတ်လိမ်း/လောင်းချထားကာ နာရီဝက်နေမှ ဘရပ်ရ်ှနဲ့တိုက်ပေးမယ်ဆို သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်လာပါတယ်။
၄။ ဆားနဲ့ သံပရိုသီးအရည်ကို ရောပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်လို့ရသေးတယ်။ ပေနေတဲ့နေရာကို ဆားပုံလိုက်၊ အပေါ်ကနေ သံပရိုရည်လောင်းပြီး တစ်ညလောက်ထားလိုက်။ မိုးလင်းမှ အသာလေးဆေးလိုက်ရုံနဲ့ အစွန်းတွေမရှိတော့ဘူး။
၅။ ရှာလကာရည်နဲ့ ရေကို ဆတူရောပြီး တံမြက်စည်းမှာဆွတ်ကာ ကြမ်းပြင်တွေ၊ ရေချိုးခန်းမျက်နှာကြက်တွေကို တိုက်ပေးလို့ရပါတယ်။
Source : Bright Side
ရင်သား တင်းရင်းစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း
အသီးအရွက်ဟင်းလျာတွေနဲ့ ဝိုင် တွဲဖက်သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်
ဖေ့စ်ဘွတ် Relationship အတွက် သတိထားစရာများ
Lock & Lock တံဆိပ်အရည်အသွေးမြင့် ထမင်းဗူး၊ရေဗူး နဲ့ပလတ်စတစ်ဗူးတွေကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူနိုင် မယ့်အခွင့်အရေး
၂၀၁၈ မကုန်ခင် SHOP က လုပ်တဲ့ 12.12 အထူးအွန်လိုင်းလျှော့ဈေးမှာ အလန်းဆုံးပစ္စည်းတွေကို Up to 80% discount အမိုက်ဆုံးဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်ဖို့
ကိုရီးယားအစားအစာတွေကိုအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်စားချင်တဲ့ အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် City Mart ရဲ့ Discover Korea Food Festival 2018
Woods' ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးမှစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ ကြင်နာယုယခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ Storyboard ဝတ္ထုတိုပြိုင်ပွဲမှ ဆုရရှိသူများထွက်ပေါ်၊ သရုပ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲဆက်လက်ကျင်းပမယ်
လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းသိထားသင့်တဲ့ နည်းပညာကိုအသုံးချပြီး Customer တစ်ဦးချင်းစီအထိဂရုစိုက်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းများ
သင်က သင့်ကုမ္ပဏီက လူကြီးတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ ခရီးသွားစရာရှိတိုင်း စီစဉ်ပေးနေရတဲ့သူလား?? ဒါဆိုရင် ဒီစာလေးကို အဆုံးထိဖတ်ကြည်ဖို့တော့လိုမယ်နော်…
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Gym မှာ အခမဲ့တစ်လလေ့ကျင့်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေး
Laptop ၊ Printer နဲ့ Storage Device တွေဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေလား ?? အရမ်းတန်တဲ့ SLN Day ရှိတယ်နော် ...
တစ်ပတ်စာ ဗေဒင် ဟောစာတမ်း - ဒီဇင်ဘာ (၄) မှ ဒီဇင်ဘာ (၁၀)
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံး Gym တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Power House Fitness Club ရဲ့ ၂ နှစ်ပြည့်ပရိုမိုးရှင်းမှာ USD 500 ဖိုးအထိ လက်ဆောင်တွေရယူနိုင်မယ့်အခွင့်အရေး